Ny politikan'angovo dia fototry ny indostria, izay fototry ny fampandrosoana.
Rehefa tsy misy ny herin'aratra sy ny angovo, dia tsy ho hisy ny indostria lehibe, tsy hisy famokarana, tsy hisy famoronan'asa, ary tsy hisy fampandrosoana.
Tsy maintsy atao laharam-pahamehana arak'izany ny fametrahana ny famokarana herin'aratra sy ny politikan'angovo mba andrakotra ireo faritra tokony hisy indostria, sy ireo toeram-ponenana ary toeram-piasan'ny olona.
Tohanana ny Indostria amin'ny fomba rehetra, manomboka amin'ny fananganana azy, ny fanamaivanana tanteraka ny hetra ampitataovana azy, tosika amin'ny famoronana asa, ny fanofanana ny mpiasa sy ny tanora mitady asa, ny fikarohana sy famoronana, ny fanampiana amin'ny fitadiavana lalam-barotra.
Tsy hananana hantra ireo tompon'andraiki-mpanjakana manataka ireo mpandraharaha sy manao kolikoly.
Ny fitaovana rehetra enti-mamokatra dia esorina tanteraka ny hetra manavesatra azy.
Apetraka ny kitapom-bola, izay azon'ny rehetra andraisana anjara, amatsiana ireo te hanangana indostria, ka ahazo zana-bola amin'izany ireo mpametra-bola. Amin'io kitapo io no ampindramana vola amin'ny vidiny ambany ny zana-bola, hanosehina ny tanora te hanangana orin'asa sy Indostria, rehefa avy nanaraka fiofanana ary hisy ny fanohanana azy sy fanaraha-maso ny fandrosoan'ny asany.
Ampandraisina anjara mavitrika amin'izany ireo mpampianatra, ny oniversité ary ireo mpikaroka.
Asongadina sy arovana ny Vita Malagasy.